Somaliland oo heshiis iskaashi la sixiixatay Shiinaha - Tilmaan Media
Xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay inay heshiisyo iskaashi oo la xiriira dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga la sixiixatay wafdi kasocda dowladda Shiinaha.
Wafdi kasocda dowladda Shiinaha oo uu hogaaminayo uqaabilsanaha Shiinaha ee Afrika ayaa Somaliland soo gaaray. Wafdiga ayaa kulamo la yeeshay madaxwaynaha Muuse Biixi Cabdi iyo madax sare oo katirsan xukuumada Somaliland.
War kasoo baxay madaxtooyada Somaliland ayaa lagu sheegay in wadahadallada labada dhinac looga hadlay sidii loo xiijin lahaa xiriirka Shiinaha iyo Somaliland.
Masuuliyiin katirsan xukuumadda Somaliland ayaa sheegay in ujeedada wafdiga uyimid ay ahayd sidii ay Somaliland ogala xaajoon lahaayeen sidii iskaashi cusub labada dhinac u bilaabi lahaayeen.
“Maadaama Shiinuhu yahay mid kamid ah dalalka ugu awooda wayn caalamka, Somaliland na ay badeeco badan kasoo dhoofsato dalkaas waxaan kawada hadalnay sidii loosii xoojin lahaa xiriirkaas” ayuu yiri wasiir kuxigeenka arrimaha dibadda Somaliland.
Wadahadaladaan ayaa kusoo aadaya xilli Somaliland iyo Taiwan ay heshiis iskaashi dhawaan gareen. Arintaan ayaa ka caraysiisay dowladda Shiinaha, waxayna u muuqataa in Shiinuhu ka hortagayo in xiriirka labada dhinac sii xoogaysto.